बिजुलीको बिल कहिले तिर्दा कति छुट र जरिवाना लाग्छ?:: Naya Nepal
बिजुलीको बिल कहिले तिर्दा कति छुट र जरिवाना लाग्छ?
काठमाडौं-कोभिड-१९ महामारीका कारण विद्युत महसुल भुक्तानीमा उपभोक्तालाई समस्या परेको भन्दै ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाई मन्त्री वर्षमान पुनले अघिल्लो हप्ता नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बिलम्ब शुल्क नलिन निर्देशन दिए। मन्त्रीको निर्देशनपछि प्राधिकरणले पनि भदौ महिनाको विद्युत महसुल असोज २२ गतेसम्म भुक्तानी गर्दा अतिरिक्त शुल्न नलिने घोषणा गर्‍याे। तर भदौ महिनाको बिल अझै नतिरेका ग्राहकले भने आज शुक्रबार (असोज २३ गते) देखि असोज ३० गतेसम्म महसुल बुझाउँदा थप ५ प्रतिशत बिलम्ब शुल्क तिर्नुपर्नेछ।
प्राधिकरणका अनुसार प्रत्येक महिनाको निश्चित गते ग्राहकको मिटर रिडिङ्ग गर्ने दिन तोकिएको हुन्छ। सम्बन्धित ग्राहकलाई तोकिएको सो मितिमा मिटर रिडरले बिल उपलब्ध गराउँदछन्। तर अहिले कोभिड-१९ महामारीका कारण मिटर रिडर नआएमा वा बिल प्राप्त नभएमा ग्राहकले सम्बन्धित कार्यालयमा सम्पर्क गरी बिल लिनुपर्दछ। यसरी ग्राहकले मिटर रिडिङ्ग हुने दिनसमेत गरि ७ दिनभित्र बिल भुक्तानी गर्दा बिल रकममा २ प्रतिशत छुट पाउँछन्।
तर मिटर रिडिङ भएको ८ औं दिनदेखि १५ औं दिनसम्म बुझाएमा बिल रकममात्र बुझाए पुग्छ। १६औं दिनदेखि ३०औं दिनसम्म बुझाएमा ५ प्रतिशत थप शुल्क (जरिवाना) लाग्छ। त्यस्तै ३१औं दिनदेखि ४० औं दिनसम्म बुझाएमा १० प्रतिशत र ४१ औं दिनदेखि २५ प्रतिशत थप दस्तुर लाग्दछ। मिटर रिडिङ भएको ६०औं दिनभित्र पनि महसुल भुक्तानी नभएमा भने प्राधिकरणले ग्राहकको विद्युत लाइनसमेत काट्न सक्छ।
विद्युत बिल अग्रिम भुक्तानी पनि गर्न पाईन्छ। यसरी अग्रिम भुक्तानी गर्दा विगतका महिनाको औसत बिल अनुमान गरी बिल भुक्तानी गर्न सकिन्छ। सो बराबरको रकम अनुमान गरी अग्रिम बुझाई सकेपछि विद्युत महसुल अनुसारको बिल हिसाब मिलान गर्दा पनि ग्राहकले २ प्रतिशत छुट पाउँछन्।
प्राधिकरणका कर्मचारीबाट विद्युत खपत बिल प्राप्त नभएमा ग्राहकले आफ्नो मिटर रिडिङ हुने दिनअनुसार सोझै काउण्टरमा गई पुरानो बिलबाट ग्राहक नम्बर देखाएर विद्युत महसुल पनि भुक्तानी गर्न सक्छन्। ग्राहक स्वयंले मिटर पढन जान्ने र त्यहीअनुसार बिल भुक्तानी गर्ने हो भने समयमा मिटर रिडिङ नहुँदा पनि जरिवाना रकमको झन्झट ब्यहोर्नु पदैैन। मिटर रिड गर्दा ग्राहकले मिटर रिडिङ्ग हुने दिनमा कति अंक मिटरमा पुगेको छ त्यो टिप्नु पर्दछ र त्यसपछि अघिल्लो महिनाको बिलमा भएको भएको रिडिङ अंक राखी प्राधिकरणको वेबसाईटमा गएर पनि कति बिल तिर्नुपर्ने हो सो रकम यकिन गर्न सकिन्छ।
नेपाली सिने जगतकी अभिनेत्री ऋचा शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि एक पत्र लेखेकी छिन् ।
यनले आफ्नो फेसबुक अकाउन्टमा प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै पत्र लेखेकी हुन् जसमा उनले नेपालमा बढ्दो बलात्कारको घटना र घटनामा संलग्न अपराधीलाई दिइने सजायलाई आफ्नो विषयवस्तु बनाएकी छिन् ।
उनले लेखेकी छिन्, ‘एउटी अभिनेत्रीबाहेक यो देशलाई माया गर्ने चेली, एउटी नारी भएकोले हिजोआज आफैलाई लाज लाग्न थालेको छ, डर लाग्न थालेको छ, मन आत्तिन थालेको छ । ’
उनी थप्छिन्, ‘ती अबोध बालिकाहरुको कल्पना मात्रैले पनि छाती पोलेर आउँछ । मलाई भोलिको दिनमा मेरी छोरी जन्मिएला भन्ने डर लाग्न थालेको छ । मलाई छोरीको लागि सुरक्षित ठाउँ बनाउन नसकुला कि भन्ने डर लाग्न थालेको छ । मलाई भोलि छोरा पाउन पनि डर लाग्न थालेको छ । मैले जति संस्कार र अनुशासन सिकाउन खोजे पनि यो देश र यहाँको कानूनले केहि नगर्ने रहेछ भन्ने मनस्थितीमा हुर्किन्छ कि भन्ने पीर पर्न थालेको छ । ’
पानीको मूल्य र गुणस्तरमा ठगिएको भन्दै बढे गुनासा, विभाग भन्छ– स्टिङ अपरेसन चलाउँछौं
काठमाडौं– पछिल्लो सयम जार र बोतलको पिउने पानीका उपभोक्ता ठगिएका गुनासा बढ्न थालेका छन्। जारको पनि महंगो मूल्यमा बेच्ने गरेको, पानीमा किरा/लेउ भेटिने गरेको, चुहिने र फोहोर जारमा पानी बेचेको लगायतका गुनासा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा आउन थालेका हुन्।
विभागले गत साउन र भदौ महिनामा पिउने पानीका उद्योगहरुमा अनुगमनलाई तिब्र बनाएको थियो। त्यसबेला करिब ४ दर्जन पानी उद्योगहरु कारबाहीमा पनि परेका थिए। तर पछिल्लो समय विभागको अनुगमन अरु क्षेत्रमा केन्द्रित भएपछि फेरि पानीमा उपभोक्ता ठगिएको गुनासो आउन थालेका हुन।
वाणिज्य विभागका प्रवक्ता रविन्द्र आचार्यका अनुसार पिउने पानीको मूल्य र गुणस्तर दुवैमा उपभोक्ताले गुनासो गर्ने गरेका छन। ‘पानीमा ठगिएका गुनासो पछिल्लो समय बढेका छन। यस्ता गुनासो मूल्य र गुणस्तरसँगै छन। हामी चाँडै अनुगमन शुरु गर्छौ‚’ उनले भने। विभागले पानी उद्योग र वितरक हरुसँग सम्बन्धित सूचनाहरु संकलन गरिरहेको र अब केही दिनभित्रै स्ट्रिङ अपरेसनमा जाने आचार्यको भनाइ छ।
जार र बोतलको पानीको मूल्यको हकका वाणिज्य विभागले गत भदौ १० गतेबाट लागुहुनेगरी मूल्य तोकेपनि संसदीय समितिको हस्तक्षेपपछि उक्त मूल्य कार्यान्वयनका आएको छैन। तुलनात्मक रुपमा बजार मूल्यभन्दा बढी अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) तोकिदिएपछि विभागको उक्त निर्णय विवादमा आएको थियो।
तर अहिले पानी व्यवसायीहरुले पानीको मूल्य बढाउन थालेका छन। प्रतिस्पर्धी बजारमा प्रतिजार ३० देखि ४० रुपैयाँमा बिक्री वितरण भइरहेकोमा व्यापारीहरुले अहिले मूल्य बढाएर प्रतिजार ५० देखि ६० रुपैयाँसम्म बनाएका छन्।
पछिल्लो समय विभागले दशै तिहारलगायत चाडबाड लक्षित बजार अनुगमन गरिरहेको छ। जसमा खाद्यान्न, लत्ताकपडाजस्ता क्षेत्रमा विभागको अनुगमन केन्द्रित छ। दैनिक ३ देखि ५ वटासम्म अनुगमन टोली बजार अनुगमनमा खटिने र औसत दैनिक २ दर्जन व्यवसायिक फर्ममा अनुगमन भइरहेको भएपनि क्षेत्रगत रुपमा विभागको अनुमगन पर्याप्त र प्रभावकारी छैन।
उपभोक्ताको गुनासो आएपछि गत साउन‚ भदौमा पानीमा केन्द्रित बजार अनुगमन भएको थियो भने त्यो बेला गुनासो पनि कम आउने गरेका थिए। तर अहिले विभागको अनुगमन अर्कै विषयमा केन्द्रित भएपछि फेरि पानीमा उपभोक्ता ठगिएको गुनासो आउन थालेका हुन्।